MODA | Article Detail | စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာဖို့ခရီးထွက်ကြစို့
by Yin Moe Shinn
လာမယ့်ပိတ်ရက်တွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချဖို့ခရီးသွားကြရအောင်။ နေ့စဉ်အလုပ်တွေကြောင့်လူတိုင်းစိတ်ရောလူရောပင်ပန်းနေကြမှာအသေအချာပါ။ အဲဒီထဲမှာသေချာတာတစ်ခုကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းမှုပါ။ ဟိုးအရင်အခြေအနေတွေထက်ပိုပြီးတိုးတက်လာလေလေ ပိုပြီးပင်ပန်းလာလေလေဖြစ်နေတဲ့လူသားတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်ကျင်လည်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေခဏတာရုန်းထွက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီဘဝအမောတွေကို ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့
စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာစေမယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ခရီးသွားခြင်းကအမှန်တကယ်သင့်ကိုပိုပြီးကျန်းမာစေမှာလား ? အမှန်တကယ်ပဲ သင့်ရဲ့မွန်းကျပ်မှုတွေကိုလျော့ကျစေမှာလား ? ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒီတော့လာမယ့်ပိတ်ရက်ရှည်လေးတွေကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချရာရောက်သလို မွန်းကျပ်နေတဲ့ သင့်စိတ်ကျန်းမာစေဖို့ အတွက် ခရီးသွားခြင်းဆိုတဲ့ဆေးကို ရွေးချယ်ကြည့်ရအောင်နာ်။ ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူအချို့အနေနဲ့ခရီးသွားခြင်းကရောဂါတစ်ဝက်သက်သာစေတယ်လို့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေအရသိရပါတယ်။ ခရီးထွက်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ကျစေတဲ့အပြင် အသစ်သစ်သော ညဏ်ရည်ကွန့်မြူးမှုကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်။
အကြံညဏ်ကောင်းတွေကို ထွက်စေတဲ့အတွက်သင့်အတွက် ခရီးသွားခြင်းကကြီးမားလေးနက်တဲ့ သင့်အတွေးအခေါ်တွေအတွက် ကောင်းကောင်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ရည်ရွယ်တာမို့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမယ့် ခရီးမျိုးကိုတော့ရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲ adventure ဆန်ဆန်ခရီးတွေကတစ်ချို့လူတွေအတွက် စိတ်ခွန်အားရစေမှာမှန်ပေမယ့် ဒါကိုမရူးသွပ်သူတွေအတွက်ကတော့ပင်ပန်းစေမယ့်အပြင် စိတ်အပန်းဖြေရာမရောက်ဘဲပိုပင်ပန်းစေမှာပါ။
ဒါကြောင့်ခရီးထွက်ဖို့နေရာရွေးချယ်မှုကမှန်ကန်နေဖို့လိုပါတယ်။ ရှုခင်းလှလှလေးတွေ၊ ပင်လယ်၊ လေ၊ တောင်တန်းစတဲ့နေရာတွေကသာ သင့်ရဲ့မကျန်းမာတဲ့စိတ်ကို အမှန်တကယ်ကုစားပေးနိုင်မှာမို့ ဒီလို နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း? နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေကျရှုခင်းတွေ မြင်ကွင်းတွေကနေ ခဏရှုန်းထွက်ပြီး အသစ်သစ်သောရှုခင်းတွေကိုခံစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီအရာက သင့်စိတ်က ိုပိုပြီးလန်းဆန်းကျန်းမာစေတဲ့အပြင် အဲဒီအချိန်တွေက ထိုက်တန်တယ်လို့ ခံစားရမှာပါ။ လုံးဝကိုမတူညီတဲ့လေထုက သင့်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝပေးမှာအသေအချာပါ။
ကျယ်ပြောလှတဲ့ပင်လယ်ကြီးကတော့ မျက်စိတစ်ဆုံးရေပြင်ကျယ်ကြောင့် သင့်မွန်းကျပ်မှုတွေကို ပြေပျောက်စေမှာပါ။ တောင်တန်းတွေကတော့ လွတ်လပ်မှုရဲ့အရသာကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာအသေအချာပါ။
မတူညီတဲ့နေရာဒေသရဲ့မတူညီတဲ့မြင်ကွင်းတွေအပြင် မတူညီတဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအချို့ကိုလည်းရှာဖွေနိုင်မှာမို့ ညီးညူနေတဲ့ သင့်စိတ်တွေ လန်းဆန်းတက်ကြွစေမယ့် အပြင်အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေပါ ရစေမှာအမှန်ပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့စိတ်မပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ လာမယ့်အားလပ်ရက်ရှည်မှာ နေရာကောင်းလေးတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းနဲ့ စိတ်ကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေနော်။
Social Influencer လုပ်တော့မယ်ဆို ဘာတွေသိထားရမလဲ
Hollywood ရဲ့ Live Action အဖြစ်မြင်တွေ့ရဦးမယ့် ကမ္ဘာကျော် Anime ဇာတ်ကားလေး Your Name
ဝူခုန်း character (၃)မျိုးအထိ ပါဝင်လာဖို့ရှိတဲ့ Black Myth : Wukong
ကိုယ်တွေလည်း Influencer ပဲလုပ်တော့မယ်
လက်ရှိမှာ Social Media တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကအရမ်းကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့ တပြေးညီ Social Influencer တွေရဲ့ Role ကလည်း Celebrity တွေနည်းတူ အရမ်းအရေးပါလာတယ်။ များစွားသော Brand တွေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ Digital Marketing Industry တွေရဲ့ Demand အဖြစ်ဆုံးနဲ့ တန်ဖိုးထားတဲ့ လူတွေထဲမှာ Social Influencer တွေကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်လာတယ်။ နာမည်ကျော် Brand တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ Product နဲ့ Service Branding တွေမှာ Celebrity တွေထက်တောင် Influcencer တွေရဲ့ ပါဝါကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးချလာကြတယ်။
တကယ်တော့ Social Influencer ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်း လွယ်တော့မလွယ်ကူပါဘူး။ Influencer တွေကသူတို့ရဲ့ Knowledge တွေ၊ Experience တွေနဲ့ Feelings တွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ Audience တွေဆီရောက်အောင် Content တွေကိုထိထိမိမိ Create လုပ်နိုင်ရတယ်။ လူအများကို Influence ဖြစ်နေစေရမယ်။ Personal Branding ကောင်းရမယ်။ တခြားအချက်တွေလည်း အများကြီး မှ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
အကယ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီ Influencer Industry ကိုစိတ်ဝင်စားသူ (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်ကိုယ်တိုင် Social Influencer လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေကိုတော့ သိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ နာမည်ကြီးတိုင်းလည်း သူ့ကို Influencer လို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ Influencer Industry ထဲဝင်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကိုတော့မေ့ထားလို့မရဘူးနော်။
ကိုယ်လုပ်မယ့် Influencer လိုင်းကိုသေချာရွေးချယ်ပါ
Influencer Industry ထဲကိုဝင်တော့မယ်ဆိုရင် သင်ကိုယ်တိုင်ကဘယ် Category ကို Influencer အဖြစ်လုပ်မှာလည်းဆိုတာပြတ်ပြတ်သားသားသိအောင်ကြိုးစားပါ။ ဥပမာ Fashion နဲ့ ပတ်သတ်တာလား၊ Lifestyle လား၊ Beauty ပိုင်းလား၊ ဒါမှမဟုတ် Technical ပိုင်းတွေကို Present လုပ်ချင်တာလား၊ Game Streaming ဘက်ကိုသွားချင်တာလား ဆိုတာအရင် Decide လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရော ဘယ်အရာတွေမှာ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေရှိလဲ။ ဘယ်အရာတွေကို ကျွမ်းကျင်လဲဆိုတာကိုလည်းသေချာ Analysis လုပ်ဖို့လိုမယ်။ ပြီးသွားရင်ကိုယ် Deliver လုပ်ချင်တဲ့ Target Audience ကိုလည်းတိတိကျကျ Set-Up လုပ်ပါ။
Technical Skill တွေကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ပါစေ
Social Inflencer လုပ်တော့မယ်၊ Blogger လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Technical-Know-How တွေကိုလည်း ကောင်းစွာသိထားဖို့လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Basic Camera Knowledge တွေ၊ Photoshop၊ Graphic Design နဲ့ Video Editing Skill တွေကိုလည်း ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဒါမှလည်း ကိုယ့်ရဲ့ Page/Youtube Channel နဲ့ Personal Blog တွေကို Social Media ပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင် Unique ဖြစ်တဲ့ Idea တွေကို ချပြနိုင်မှာမလား။
Social Media Overview ကိုအမြဲလေ့လာပါ
Social Media ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီ Social Media နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Knowledge တွေ နည်းလမ်းတွေအကုန်လုံးကို သိထားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တင်မယ့် Social Media Platform ရဲ့ Rules and Regulations တွေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံတွေ၊ Social Media Operation တွေနဲ့ Digital Marketing တွေကို လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှလည်း ကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့ Audience ကိုဘယ်လိုအရာတွေနဲ့ Attract လုပ်မယ်၊ Engagement တွေတက်အောင်ဘာတွေလုပ်ရမယ်၊ Weekly-Monthly Social Media Overview တွေကို ဘယ်လို Analysis လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သေချာလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။
Good Communication တည်ဆောက်ပါ
Social Influencer တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Interest နဲ့ Content တွေကို အများကို ချပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Presentation Skills နဲ့ Body Language တွေကအရမ်းစကားပြောပါတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကို အများကစိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်ပြောနိုင်တာ၊ Entertaining ဖြစ်အောင်ပြောဆိုနိုင်တာတွေကလည်း အောင်မြင်တဲ့ Influencer တွေမှာရှိတဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Platfrom တွေမှာလည်းအမြဲ Active ဖြစ်နေဖို့နဲ့ Responsive ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Audience တွေ၊ Fan တွေနဲ့တင်မကပဲ ကိုယ်နဲ့ လက်တွဲအလုပ်လုပ်ကိုင်ရမယ့် Brand တွေ Client တွေနဲ့ပါ ကောင်းမွန်တဲ့ Communicative ဖြစ်တဲ့ Relation တွေတည်ဆောက်ပါ။
နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအချက်က Influencer တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Brand နဲ့ Authenticity အတွက် စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ၊ ကိုယ်ဖန်တီးမယ့် Content တွေ၊ တင်ဆက်မယ့် Video တွေကိုလည်း အမြဲဆန်းသစ်နေအောင် တီထွင်ကြံဆနေရမယ်။ ပေါ်ပင်ခေတ်စားတဲ့ Trend တွေကိုလိုက်လုပ်တာထက်ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် Idea တွေနဲ့ Creativity တွေကိုသာပေါင်းစပ်ပြီး Influencer Market ကိုထိုးဖောက်ပါ။ Popularity နောက်လိုက်တာထက်ကိုယ့်ရဲ့ Creativity တွေကောင်းနေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ Influencer တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ တစ်နေ့တာမှာသင်ယူနေရပါတယ်။ ကောင်းသည်ထက်ကောင်းတဲ့ Idea တွေပြနိုင်ဖို့၊ ကိုယ့် Field မှာလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့စကားပြောစွမ်းရည်တွေရှိနိုင်ဖို့ Continuous Learning လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက Influencer အများစုကတော့ ဒီ Influencer Career ကိုပဲအဓိက Main Business အနေနဲ့လုပ်တာရှားပါတယ်။ ဒီ Influencer မလုပ်ခင်တည်းကသူတို့မှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Professional Career တွေရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ Social Influencer လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Time Management ကိုကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Social Media Platform အတွက်ထိရောက်တဲ့ Content Planning တွေကိုစဉ်းစားရပါမယ်။ ဘယ်နေ့ဘာတင်မယ်၊ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ Content Schedule ကိုလည်း စနစ်တကျဆွဲပြီးလုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ Work-Life-Balance ဖြစ်ဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်။ Schedule ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ Post တွေ၊ တင်မယ့်ရက်တွေက Consistent ဖြစ်ဖို့၊ အမြဲ Innovative ဖြစ်နေဖို့လည်း စဉ်းစားနေရပါတယ်။
အဆက်မပြတ် Create လုပ်နေတဲ့Influencer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီ Industry ထဲမှာအောင်မြင်နေဖို့ဆိုရင် Mindset ကိုလည်း အမြဲ အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်လေးထားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ တခြားသူအပေါ်မှာလည်း Respect အပြည့်အဝရှိရသလို၊ Empathy နဲ့ Sympathy လည်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Influencer တွေလည်း Celebrity တွေနည်းတူ အလုပ်ရှူပ်ပါတယ်။ Work Pressure အရမ်းများပါတယ်။ အများအရှေ့ထွက်ပြီး တင်ဆက်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တာမို့ Social Media ကတစ်ဆင့်ရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့ အကောင်းအဆိုးတွေကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ပြင်ဆင်ထားရပါတယ်။
Courtesty of Google.
COVID-19 ကြောင့် Bucket List တွေကိုပြောင်းလဲပစ်ရတော့မှာလား
အခုလို Pandemic ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ရိုက်ခတ်မှုတွေကို နိုင်ငံတိုင်းမှာ အနည်းနဲ့အများခံစားနေကြရတဲ့အချိန်ပါ။ ဒါပေမယ့် ချမှတ်ထားတဲ့ ကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးနည်းတွေကို လိုက်နာသွားရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားမှာပါ။ ပြီးတော့ အခုချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့နဲ့ စိတ်ကို Motivation တက်နေအောင်ထားနိုင်ဖို့ကလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံးက မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တာမို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အရာတွေကို အမြဲတွေးနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလိုအခက်အခဲတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အရာလေးတွေကို Bucket List အဖြစ် List Down လုပ်ပြီး Motivation ယူလို့ရပါတယ်။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် အပြင်တွေသွားလို့မရတဲ့အခါ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရ ကိုပိုသိလာတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိသားစုရဲ့ တန်ဖိုးကိုလည်း ပိုသိလာတယ်။ တစ်နည်း ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ရှင်သန်နေရတဲ့ Life ကိုလည်း ကျေနပ်လာတယ်။ COVID-19 က ကျွန်မတို့ကို သင်ခန်းစာတွေအများကြီးပေးခဲ့နိုင်တယ်။
ဒီလိုပဲ ဒီလို Pandemic ကြီးပြီးသွားတဲ့အခါ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ Bucket List တွေကိုပြန်လုပ်လို့ရတော့မှာမို့လို့ အခုတည်းက Bucket List လေးတွေလုပ်ပြီး အားမွေးထားနော်။ အများစုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့ List တွေကတော့…
ဒါကတော့ A-Must ပါ။ ရုံးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ဖြစ်၊ ဈေးသည်ဖြစ်ဖြစ် Quarantine ကာလ အိမ်မှာပဲ Work From Home လို့ရတယ်ပဲထားဦး။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အတူတကွ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ Feeling ကိုလွမ်းပါတယ်။ ဒီတော့ ရုံးတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်စားပွဲလေးကိုရှင်းမယ်။ အပင်လေးတွေထားမယ်။ ပြီးရင် အားအင်အသစ်နဲ့အလုပ်ကို Productivity ရှိရှိနဲ့ ကြိုးစားကြမယ်။
၂၀၂၀ နှစ်စတည်းက အားခဲထားတဲ့ Passport လေးနဲ့ Luggage လေးလည်း ဒီနှစ်တော့ ချောင်ထိုးထားသလိုတော့ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေတွေပြန်ကောင်းမွန်လာတဲ့အခါ ချစ်ရတဲ့ မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ခရီးတွေတဝကြီးပြန်သွားပစ်လိုက်ပါ။ ဘဝမှာ ပိုက်ဆံနဲ့လဲလို့မရတဲ့ အရာတွေထဲမှာ အမှတ်တရတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပါပါတယ်။ ဒီတော့ ပြည်တွင်းဖြစ်ဖြစ်၊ပြည်ပဖြစ်ဖြစ် သွားချင်တဲ့နေရာကို သွားလိုက်ပါ။ Memories တွေအတွက် ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေလည်းရိုက်ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
COVID တစ်လျှောက်လုံး အိမ်မှာပဲချက်စားလိုက်၊ Delivery နဲ့မှာစားလိုက်လုပ်နေရတာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေပြီလား။ အပြင်တွေပြန်ထွက်လို့ရပြီဆိုရင် သင့်ကိုယ်သင်ကောင်းကောင်း Treat လုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်နော်။ သင့်ချစ်သူနဲ့၊ မိသားစုနဲ့ စားချင်တဲ့ Restaruant မှာ ကောင်းကောင်းလေးမှာစားပါ။ သူတို့ကိုလည်း ကောင်းကောင်း Treat လုပ်ပြီး သင်ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း၊ တန်ဖိုးထားကြောင်းကိုလည်း ပြောဖို့အမေ့ပါနဲ့။
အိမ်ထဲမှာပဲနေကြရတာကြောင့် လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကို ပိုပြီးသိလာမှာတော့အမှန်ပဲ။ ဒီတော့ သဘာဝကို ကောင်းကောင်းကြီးခံစားပါ။ အပင်လေးတွေစိုက်ပါ။ ပန်းခြံမှာအေးအေးဆေးဆေး လမ်းလျှောက်ပါ။ ရေကန်ကျယ်နဲ့ လေပြေလေညှင်းလေးတွေကိုစီးမျောရင်း လှပလွန်းတဲ့နေဝင်ချိန်ကိုခံစားကြည့်ပါ။ သဘာဝကပေးထားတဲ့လက်ဆောင်တွေက အိမ်ထဲမှာပဲနေရတဲ့အချိန်မှာမှ ဘယ်လောက်အဖိုးတန်လဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်။
မလုပ်လိုက်ရတဲ့ မွေးနေ့ပွဲတွေပြန်လုပ်မယ်၊ မင်္ဂလာပွဲတွေ ကျင်းပကြမယ်
ဒါကတော့ လူစုလူဝေးတွေမလုပ်ရတော့တာကြောင့် နောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ့် မွေးနေ့တွေ၊ မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွေကို ပြန်ပြီးကျင်းပကြမယ်။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝရဲ့အခိုက်အတန့်တွေကို ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ အတူတူ ဖြတ်သန်းကြမယ်။
ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးကိုတော့ မေ့ထားလို့မဖြစ်ဘူးနော်။ အိမ်မှာပဲ Home Work Out တွေအမုန်းလုပ်ပြီးသွားရင် Pandemic ကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျ အပြင်မှာလေကောင်းလေသန့်ရအောင် လမ်းလျှောက်တာတို့၊ Jogging လုပ်တာတို့ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ပြီးရင် Gym သွားပြီး အမိုက်စား Training တွေနဲ့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းပါ။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်၊ အစားကောင်းကောင်းစားပြီး ကိုယ်ခံအားကိုအမြဲမြှင့်တင်လိုက်ပါ။
Photosource from Pinterest.
အခုလို အခက်အခဲကာလမှာ ငွေကို ဘယ်လိုသုံးစွဲသင့်လဲ
Covid-19 ကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေထိခိုက်လာတာအပြင် နောက်ထပ်အများဆုံး သက်ရောက်တဲ့ Sector က စီးပွားရေးပါ။ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ တခြား Travel &Tourism လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းထခိုက်မှုတွေကြုံတွေ့လာရတယ်။ လုပ်ငန်းဖျက်သိမ်းတာတွေ၊ ဝန်ထမ်းလျှော့ချတာတွေနဲ့ အလုပ်လက်မဲ့တွေလည်း အနည်းနဲ့ အများကြုံတွေ့လာရတယ်။ အိမ်ထဲမှာပဲနေရတာကြာတော့ လူတွေလည်း ငြီးငွေ့လာကြတာတော့သဘာဝပါ။ အလုပ်တွေလည်း Work From Home တွေဖြစ်လာကြတော့ ငွေရေးကြေးရေးအတွက် Spending လုပ်တဲ့ အလေ့အထတွေလည်း ပြောင်းလဲလာတယ်။ Online ကနေမှာယူတာတွေအလွန်များပြားလာတယ်။
ဒါပေမယ့် အားလုံးသတိထားဖို့က အခုချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဝင်ငွေထွက်ငွေကို ချင့်ချိန်သုံးစွဲနိုင်မှာ ရေရှည်မှာ ရပ်တည်ဖို့အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။ Covid-19 ကြောင့်ဝင်ငွေတွေ ပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးကို ချွေတာသုံးစွဲနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ အခုချိန်ထိ ငွေသုံးတာကို Control မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင် အောက်ပါနည်းလေးတွေအတိုင်း Budget ကို Limit လုပ်ပြီးသုံးကြည့်ပါနော်။
လူအများစုရငွေနဲ့သုံးငွေမလောက်တာက ရှိတဲ့ပိုက်ဆံကို အရင်သုံးပြီးမှ ကျန်တဲ့ ပိုက်ဆံကိုဆုကြတာကြောင့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် Income ထဲကငွေကိုမသုံးခင် 10% ကိုအရင်စုပါ။ ပြီးမှာကျန်တဲ့ငွေကိုသုံးပါ။ ဒီ Percent ထက်ပိုစုနိုင်ရင်လည်းပိုကောင်းပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ကိုယ့်ဝင်ငွေကို စည်းစနစ်နဲ့စုတဲ့အလေ့အကျင့်လေးကို ရစေချင်တာကြောင့်ပါ။ အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါ စုငွေတွေက သင်ထင်ထားတာထက်တောင်သင့် Bank Account ထဲမှာရှိနေပါလိမ့်မယ်။
နာမည်ကြီး Restaurant တွေကနေ Food Delivery နဲ့မှာစားတာက တစ်ခါတစ်ရံအကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် ရေရှည်မှာတော ကိုယ့် Budget အရမ်းထောင်းပါတယ်။ အဲ့လိုမှာစားမယ့်အစား လတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာတွေကို ကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီး အိမ်မှာ ချက်ပြုတ်စားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ Fast Food တွေစားမယ့်အစား အိမ်မှာပဲ Organic Snack တွေကိုစားပါ။ Starbucks ဝယ်သောက်တာထက် ကိုယ့်အိမ်မှာ Coffee Maker နဲ့ အကြိုက်ဖျော်သောက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ Budget ကိုချွေတာရာရောက်သလို ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်စေပါတယ်။ အရမ်းလည်းမစားဖြစ်တော့ အဝလွန်တာတွေ၊ ဝိတ်တက်တာတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
ဒီအချက်က မိန်းကလေးတွေ Control မလုပ်နိုင်ဆုံးအချက်ပါ။ ဘာလဲဆိုတော့ Online မှာလိုချင်တာတွေ့ပြီဆိုမစဉ်းစားပဲ ဝယ်ဝယ်မိနေတာကိုပါ။ ဒီလိုနဲ့ နည်းနည်းပဲဝယ်တာပါဆိုတဲ့ ဆင်ခြေနဲ့ လကုန်တဲ့အခါ မှာထားတဲ့ Order တွေကများသွားရော။ အဲ့လိုမဖြစ်အောင် ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက်တကယ်လိုအပ်လား၊ မလိုအပ်လားစဉ်းစားပါ။ အဲ့ဒါဝယ်မယ့်အစား တခြားအစားထိုးလို့ရတဲ့ ပစ္စည်းကိုယ့်မှာရှိနေလားပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဒီလိုလေးချင့်ချိန်သွားရင် မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ငွေကုန်ပေါက်တွေမများတော့ဘူးပေါ့။
Bucket List လုပ်ပါ
လိုချင်တာတွေ၊ လိုအပ်တာတွေအတွက်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Bucket List လေးကိုလည်း သတိရပါ။ Bucket List ဆွဲဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ ငွေစုတဲ့အခါလည်း ဒီ Bucket List လေးနဲ့စုရင် ပိုပြီး Motivation ရပါတယ်။ ဥပမာ ဒီ Pandemic ကြီးပြီးသွားရင် ခရီးသွားဖို့တို့၊ Donation တွေလုပ်ဖို့တို့၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Festival လုပ်ဖို့ဆိုပြီး Goals လေးနဲ့ ငွေစုကြည့်ပါ။
အခုချိန်မှာ အလုပ်အကိုင်တွေကျပ်တည်းနေတာမို့ Office Work အပြင် တခြားဝင်ငွေရနိုင်မယ့် Small Business လေးတွေကိုလည်း Try ကြည့်ပါ။ အခုက Online ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီး ဝင်ငွေရှာလို့ရနေပါပြီ။ တကယ်လို့ Online Shop မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလည်း ဝါသနာပါရာကိုယ့်ရဲ့ Talent တွေကိုချပြတဲ့ Influencer ၊ Blogger တွေအနေနဲ့လည်းလုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။
#How to save budget during quarantine
ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပိန်သွယ်သယောင်ဖြစ်နေစေမယ့် အမိုက်စား Pose ပေးနည်း
Facebook မှာပဲကြည့်ကြည့်၊ Instagram မှာပဲကြည့်ကြည့် ခန္ဒာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလှလှနဲ့ မိန်းကလေးတွေပေါ်ကို အမြဲလိုလို တွေ့မြင်နေရမှာပါ။ တချိူ့ဆို ပြည့်ပြည့်၀၀လေးတွေဆိုပေမယ့် ပုံတွေကြည့်လိုက်ရင် အချိူးအစားကျကျနဲ့ မိုက်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပုံတွေရဖို့ တကယ်တမ်းတော့ မခက်ခဲပါဘူး။ ဓာတ်ပုံရိုက်နေကျလူတွေမို့ ဘယ်လိုအနေအထား၊ ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာ အလိုလိုသိနေကြလို့ပါ။
ကိုယ်ရိုက်လိုက်တိုင်း ပုံတွေကြည့်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျရတာလည်း မဖြစ်ရအောင်၊ Camera ထဲမှာ ပိန်သယောင်ဖြစ်နေစေဖို့ ခုပြောပြမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ က သိပ်ကို အသုံးဝင်မှာ အသေအချာပါပဲ။ အမိုက်စား Outfit နဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ်လေးရိုက်ဖို့အတွက် နောက်တစ်ခါဆို စိုးရိမ်စရာမလိုလောက်တော့ဘူးနော်။
မတ်တပ်ထနေတဲ့ပုံလေးကို တစ်ကိုယ်လုံးစာ ရိုက်ယူမယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းလေးက လူကို ပိန်သွယ်သယောင်ဖြစ်စေမှာပါ။ ထောင့်ချိူးလေးအတိုင်းရပ်နေပြီး ခြေထောက်ကို ကန့်လန့်ဖြတ်လေးထားပြီး ရိုက်ပါ။ စုံရပ်တဲ့ ပုံစံထက် ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။
ထိုင်နေတဲ့ပုံလေးတွေကို ရိုက်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ရှိလက်ရှိထိုင်ပြီး Pose မပေးပဲ ထိုင်ခုံအစွန်းလေးမှာ သာထိုင်ပြီး ခြေထောက်တွေကို အပြင်ကို ထုတ်ထားပါ။ ခြေပြစ်လက်ပစ်ထိုင်ခုံပေါ် အပြည့်ထိုင်တာက ပေါင်တွေ၊ ခြေထောက်တွေကို ဗက်ကျယ်သွားစေပြီး ပိုပြီး ကြီးသွားသယောင်ဖြစ်စေပါတယ်။ ခြေတန်ရှည်ရှည်ဖြစ်စေဖို့ ခြေထောက်တွေကို အနည်းငယ်ထောက်ထားပြီးရိုက်ပါ။
ပိန်တဲ့သူတွေတောင်မှ ငိုက်ငိုက်၊ ကိုင်းကိုင်းကြီးနေရင် ပုံထဲမှာ တော်တော်လေးကြည့်ရဆိုးပါတယ်။ ပုခုံးတွေကို နောက်ပစ်ထားပြီး ခပ်မတ်မတ်အနေအထားက ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံဖြစ်စေပြီး ခန္ဒာကိုယ်အနည်းငယ် သွယ်သယောင်ဖြစ်စေပါတယ်။
ဘေးနှစ်ဖက်မှာ လက်ကို ဒီတိုင်းချထားတာက ပိုပြီး ဝပြီး ပုတဲ့အသွင်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ လက်တွေကို ခန္ဒာကိုယ်နားမှာ ကပ်မထားပဲ အလုပ်နည်းနည်းပေးလိုက်ပါ။ မြှောက်ထားတာ၊ ခါးထောက်ထားတာ၊ လက်လွဲလိုက်တာ စသဖြင့် လက်တွေကို အဝေးမှာ ထားပြီး ရိုက်ပါ။
မေးနှစ်ထပ်နဲ့ မျက်နှာကြီးသယောင် မဖြစ်ရလေအောင် ခေါင်းလေးကို မော့ပြီး မျက်နှာကို ရှေ့ထုတ်လိုက်ပါ။ ခေါင်း နည်းနည်းကြီးသလိုပေါ်မှာဖြစ်ပေမယ့် မေးရိုးတွေ၊ လည်တိုင်တွေကို သွယ်သယောင်ဖြစ်စေတာမို့ ဘာရွေးမလဲ ကိုယ်တိုင်ပဲ စဉ်းစားကြည့်တော့နော်။
Wear Dark Colors
အမဲရောင်က လူကိုပိန်စေတာမို့ ပုံတိုင်းမှာ အမဲရောင်ပဲ ဝတ်စရာမလိုဘူးနော်။ အရောင်ဖျော့ဖျော့တွေထက် အရောင်ရင့်ရင့်တွေကို ရွေးချယ်ပါ။ ခရမ်းရင့်ရောင်၊ နက်ပြာရောင် စတဲ့အရောင်တွေကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ အဝတ်အစားကလည်း အရေးကြီးတာမို့ အပွင့်အခက်တွေ Design တွေ ရှုပ်ယှက်ခက်နေတာက လူကိုဝစေတာမို့ အရောင်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အဝတ်အစားတွေကိုသာ ရွေးချယ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
မတ်တပ်ရပ်တာလည်းရိုးနေပြီ။ ပိန်သယောင်ဖြစ်မယ့် အခြား Pose ဆိုရင်တော့ ဘေးတစောင်းမှီတာ၊ ရပ်တဲ့ Pose လေးက အသုံးဝင်မှာပါ။ ပုံထဲမှာ မျဉ်းစောင်းပုံစံဖြစ်သွားလို့ အရပ်ရှည်ပြီး ဗိုက်ပူနေတာ၊ ခါးတုတ်နေတာကိုလည်း ဖုံးဖိသလိုဖြစ်စေပါတယ်။
#How to look tall
သူကိုယ့်ကို J ဝင်နေတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
အရှေ့မှာကျ ချစ်တွေ၊ သဲတွေလုပ်ပြီးကွယ်ရာမှာတော့…
လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုတဲ့ အတိုင်း လူ့ Society ထဲမှာတော့ ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေရှိသလို ၊ ကိုယ့်ကို မသိမသာ မနာလိုမုန်းတီးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က သင့်အပေါ်မနာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ သင်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေတာဖြစ်ဖြစ်၊ သင်ကသူတို့ထက်တစ်နေရာရာမှာ သာလွန်နေတာဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့မပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကို သင်ကပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ဖြစ် Jealousy တွေဆိုတာရှိလာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ပိုအံ့သြစရာကောင်းတာက အဲ့လို Jealousy ရှိတဲ့သူတွေက သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထဲက ဖြစ်နေနိုင်တာပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့်တတ်နိုင်ရင် အရမ်းအယုံမလွယ်ပဲ အသိသတိလေးနဲ့နေထိုင်တာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိတ်ဆွေတုတွေ၊ မနာလိုတတ်သူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲ။ ကိုယ့်ကို Jealousy ရှိမရှိဆိုတာ ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်။
သင့်ကို အရှေ့မှာတော့ ပုံမှန်ထက်တောင်လွန်တဲ့ ချီးမွမ်းစကားတွေ၊ ချိုသာတဲ့စကားတွေပြောပါတယ်။ Social Media မှာဆိုရင်လည်း သင့်ကို အရမ်းခင်၊ အရမ်းချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းပုံစံ Comment တွေပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်တို့၊ သဲတို့၊ အရမ်းလှတာပဲလို့ပြောနေပေမယ့် ရင်ထဲကမပါတဲ့ စကားတွေပါ။ အရှေ့မှာတော့ အဲ့လိုချီးမွမ်းစကားတွေပြောနေပေမယ့် အတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့ သင့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကို မလိုလားကြပါဘူး။
လိုက် Stalk နေမယ်
J ဝင်နေသူတွေကသူတို့အကြောင်းထက်တောင် သင့်အကြောင်းကို ပိုစိတ်ဝင်စားနေတတ်ပါတယ်။ Profile တွေ၊ My Day တွေကိုမကြာခဏဝင် Stalk တယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့သင်ဘယ်တွေသွားတယ်၊ ဘာတွေလုပ်တယ်၊ ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့တယ်တွေကအစအရမ်းသိချင်ကြတယ်။ သင်တစ်ခုခုအောင်မြင်နေတာတွေတွေ့ရင်လည်းစိတ်ထဲမှာ နေမထိထိုင်မသာနဲ့ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတတ်တယ်။
Jealousy စိတ်ရှိတဲ့သူတွေက သင်နဲ့ အရာရာမှာနှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေပါ။ သင်ဘယ်လိုဝတ်စားတယ်၊ ဘယ်လိုနေတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတာ၊ ဘယ်လို အလုပ်တွေလုပ်နေလဲ စသည်ဖြင့် အရာရာမှာ သင့်ထက်သာအောင် ကျိတ်ပြိုင်နေလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ သင်သူ့ထက်သာနေတာမြင်ရင်စိတ်ထဲမှာ နေမထိထိုင်မသာတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
သင့်ကို Copy လုပ်မယ်
သင့်ကို မနာလိုသူတွေက သူတို့မသိစိတ်ထဲမှာ သင့်ကိုကျိတ်ပြိုင်နေသူ၊ သင့်ထက်သာချင်နေသူမို့ သင့်နေပုံထိုင်ပုံ Style တွေကိုလိုက်အတုခိုးကြတယ်။ Duplicate လိုက်လုပ်ကြတယ်။ ဒီလိုအကုန်လိုက်အတုခိုးပြီးတော့လည်း အများရဲ့ Attention ကိုရအောင်းကြိုးစားလေ့ရှိကြတယ်။
သင့်အကြောင်း သူတစ်ပါးကို Spoil လုပ်မယ်
ကိုယ်ကတော့သူကို သူငယ်ချင်းကောင်းလို ယုံကြည်လို့ကိုယ့်အကြောင်းတွေ၊ Personality တွေပြောပြပေမယ့်သူတို့ကဒီအချက်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တစ်ခြားသူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ သွားပုပ်လေလွင့်ဝေဖန်ပြောဆိုတတ်ကြတယ်။ Spoil တတ်ကြတယ်။ သင့်မကောင်းကြောင်းတွေကို တစ်စိတ်ကိုတစ်အိတ်လုပ်ပြောတတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သလောက်အယုံမလွယ်ဖို့ သတိထားနော်။
Jealousy ဝင်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတုတွေက တကယ်တမ်း သင်အခက်အခဲကြုံတဲ့အခါ မကူညီပဲ ရှောင်ပုန်းနေတတ်ကြသလို သင့်ရဲ့ ကျရှုံးချိန်တွေမှာလည်း အတွင်းစိတ်မှာ ဝမ်းသာနေတတ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့သူငယ်ချင်းကောင်းလိုရှိနေပေမယ့် သင်တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ အသံတောင်ကြားရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
လူတစ်ယောက်ဟာ အခြေအနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရုတ်တရက်ကြီး လက်ထဲပိုက်ဆံပြတ်လုဆဲဆဲအခြေအနေမျိုးတွေကို အမှတ်မထင် ကြုံတွေ့ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခုလို Crisis အခြေအနေမျိုးမှာ ဘိုင်ပြတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ ကြုံရဖို့ပိုများတာကြောင့် အရေး‌အကြောင်းလက်ထဲမှာသုံးစရာကျန်အောင် အသုံးစရိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ချွေတာသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မလိုအပ်တဲ့သုံးစွဲမှူလေးတွေကိုလျှော့ချပြီး လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးစရာချန်ထားနိုင်အောင် ကိုယ်ဂရုမထားမိပဲသုံးမိတတ်တဲ့ အသုံးစားရိတ်လေးတွေကို သတိထားနိုင်ဖို့အတွက် စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မလိုအပ်ပဲ အွန်လိုင်းShopတွေက အများကြီးကြိုတင်ပြီး စွတ်မှာထားတာမျိုးမလုပ်မိဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ပိုက်ဆံပြတ်ခါနီးမှ မှာထားသမျှပစ္စည်းတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာ မျက်နှာပျက်စရာလည်းဖြစ်နိုင်သလို အရှက်လည်းကွဲနိုင်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံနည်းနေပြီဆိုရင် သွားရည်စာစားတာမျိုးကိုလုံး၀လျှော့ချသင့်ပါတယ်။ ပါးစပ်အရသာခံရုံ သွားရည်စာလေးတွေအတွက်ကုန်ကျသွားမယ့်ကုန်ကျစားရိတ်ကြောင့် ဗိုက်ပြည့်မယ့်အစားအသောက်အတွက်သုံးဖို့မကျန်တော့တာမျိုးအဖြစ်မခံပါနဲ့။
ပိုက်ဆံပြတ်ခါနီးဆို လူအများစုက မျှော်လင့်တကြီးနဲ့ ထီထိုးကံစမ်းတာမျိုးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါက မှားတော့မမှားပေမယ့် မှန်တဲ့အရာတစ်ခုတော့လုံး၀မဟုတ်ပါဘူး။ ကံစမ်းတယ်ဆိုတာဟာ 100 မှာ5ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာအခွင့်အလမ်းရှိတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီး ကိုယ့်အိတ်ထဲကပါသွားဖို့သာ ရာခိုင်နှုန်းပိုများတဲ့အရာမျိုးဖြစ်နေတာပါပဲ။
သာမာန် ခေါင်းလျှော်တာ ၊ လက်သည်းခြေသည်းဆေး‌ဆိုးတာလောက်ကို အိမ်မှာပြုလုပ်လို့ရရဲ့သားနဲ့ Beauty Salon တွေသွားလုပ်တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါဟာလည်း မလိုအပ်ပဲပိုက်ဆံဖြုန်းတီးတဲ့အထဲမှာပါနေပါတယ်။ကိုယ့်လက်ထဲ ပိုက်ဆံဖောဖောသီသီ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ဇိမ်ခံတဲ့အနေနဲ့ရော ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ Serviceကိုလိုချင်တာကြောင့်ရော Beauty Salon မှာ ခေါင်းလျှော် ၊ဆေး‌ဆိုးတာမျိုးက မမှားပေမယ့် ဘိုင်ပြတ်ခါနီးအချိန်မျိုးမှာတော့ ဒီကိစ္စလေးတွေကို အတတ်နိုင်‌ဆုံး အိမ်မှာသာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်နော်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ၊ အပြင်လျှောက်လည်တာ ၊ ဘား ၊ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်တာ စတဲ့ အပန်းဖြေခြင်းမျိုးတွေဟာလည်း ပိုက်ဆံပြတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ခဏလောက်အောင့်အည်းသည်းခံပြီး ဖြတ်ထားသင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစား ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့အပန်းဖြေခြင်းမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ သီချင်းနားထောင်တာ ၊စာဖတ်တာ ၊ အွန်လိုင်း ဒါမှမဟုတ် Free ရုပ်သံလိုင်းတွေကလာတဲ့ဖျာ်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကြည့်တာနဲ့ ဂိမ်းဆော့တာလိုမျိုးတွေကိုသာ အဓိကဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာ အကြံပြုပါရစေ။
ယောက်ျားလေးအများစုဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ဖြစ်တဲ့ မိန်းမသားတွေအပေါ်မှာ ဆွဲဆောင်မှူအားကောင်းစေဖို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားကြပါတယ်။ တချို့ကပညာထူးချွန်မှူနဲ့ တချို့ကရုပ်ရည်နဲ့ တချို့ကခန္ဓာကိုယ်အလှနဲ့ တချို့ကငွေကြေးချမ်းသာမှူနဲ့စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ကိုယ်အကြိုက်တမျိုးဆိုသလို ကိုယ်ကြိုးစားရယူထားတဲ့အရာတစ်ခုဟာ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အပေါ် အမှန်တကယ်သက်ရောက်မှူရှိရဲ့လားဆိုတာကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သွားပါပြီ။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှူဟာ သူတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဲဒီမိန်းကလေးနဲ့နီးစပ်နိုင်ဖို့ အရမ်းကိုအလှမ်းဝေးသွားပြီမဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်မို့ ခုဖော်ပြမယ့်အချက်လေးတွေကတော့ မိန်းကလေးတွေအများစုနှစ်သက်နိုင်လောက်တဲ့ ဘုံဆန်တဲ့အချက်ကလေးတွေဖြစ်တာမို့ ဒီအချက်ကလေးတွေထဲကဘယ်အချက်ကိုများကိုယ်ကပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပြီလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်အချက်တွေထပ်ပြီးရှိလာဦးမယ်ဆိုရင် ခုထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်အားကောင်းလာနိုင်သေးလဲဆိုတာကို သိရဖို့ တိမ်မြုပ်နေနိုင်သေးတဲ့ဆွဲဆောင်အားတွေကို တချက်ရှာဖွေကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
တချို့ယောက်ျားလေးတွေမှာ မွေးရာပါ ပင်ကိုယ်ဗီဇကိုက ဟာဉာဏ်လေးတွေပါလာတတ်ကြပါတယ် ။ တချို့ကလည်း လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို ပြုံးအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို စာအုပ်စာပေတွေများများဖတ်ရှူခြင်းဖြင့်ဖန်တီးယူကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဟာသဉာဏ်ဆိုတာ တော်တော်လေးကို ထိရောက်အားကောင်းတဲ့ ဆွဲဆောင်မှူတစ်ခုပါ။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုဟာသဉာဏ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ကြည့်ရင် သူတို့ အနှစ်သက်ဆုံးလက်ဝတ်ရတနာတစ်ခုကိုမြင်နေရသလိုပါပဲတဲ့ ။ မရယ်ရတဲ့ဟာသတွေပြောပြီး ငပေါကြီးတော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့။
အနံ့ဆိုးတဲ့ပန်းတစ်ပွင့်ကို ဘယ်သူမှ မခူးချင်ကြသလို ကိုယ်နံ့ ၊ ချွေးနံ့ ၊ခံတွင်းနံ့ နံဟောင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အနား ဘယ်သူမှတော်ရုံတန်ရုံကပ်ချင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မွှေးပျံ့တဲ့ကိုယ်နံ့ရှိတာဟာလည်း ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေထဲကတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ အမြင်ပိုင်းလေးသန့်ပြန့်နေရုံနဲ့မပြီးပဲ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကိုပါ အထူးဂရုစိုက်သင့်တဲ့အပြင် ရေမွှေးကောင်းကောင်းတစ်လုံးဝယ်ဖို့ကိုလည်း ဘယ်တော့မှမနှမြောသင့်ပါဘူး။ဆွဲဆောင်အားပြည့်ဝတဲ့ရနံ့တစ်ခုဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလှည့်စားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုသိထားသင့်ပါတယ်။
တောင်းမှာအကွပ်လူမှာအဝတ်ဆိုသလို အဝတ်အစားကို ကျကျနန သားသားနားနားနဲ့ ဖက်ရှင်ကျကျဝတ်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို မိန်းကလေးတော်တော်များများသဘောကျကြပါတယ်။ ပေတိပေစုတ်နဲ့ဖြစ်သလိုဝတ်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ချောမော ကြည့်ကောင်းနေပါစေ စမတ်ကျကျကျော့မော့နေအောင်ဝတ်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ ယှဉ်လာရင် နောက်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကြီးသည်ဖြစ်စေ ဈေးပေါသည်ဖြစ်စေ သပ်သပ်ရပ်ရပ် စမတ်ကျအောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အဝတ်အစားတစ်စုံရဲ့အရှိန်အဝါဟာလည်း လူတစ်ယောက်ကို အနေအထားတစ်ခုထိတွန်းပို့ပေးနိုင်တာမို့ အဝတ်အစားကိုဖက်ရှင်ကျကျဝတ်စားဖို့ ဘယ်တော့မှမငြင်းဆန်ပါနဲ့။
ထက်မြက်ပြီး ဉာဏ်ရွှင်တဲ့ကောင်လေးတွေတော်တော်များများကလည်း မိန်းကလေးတွေရဲ့ကြိုတင်မက်ထားတဲ့အိပ်မက်တွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပါတတ်ကြပါတယ်။ အကြောင်းကိစ္စ၊ ပြသနာအရပ်ရပ်တိုင်းကို ရှေ့ဆုံးကဦးဆောင်ပြီး အမှားအယွင်းနည်းနည်းနဲ့ ထက်ထက်မြက်မြက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ သူမျိုး၊ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့သူမျိုးကို မိန်းကလေးအများစုကကြွေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတို့အတွက် ရှေ့ကဦးဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင် သူတို့နဲ့အတူရင်ဘောင်တန်းလျှောက်နိုင်မယ့် ယောက်ျားလေးမျိုးပေါ့။ သူတို့နောက်မှာကျန်နေခဲ့မယ့်ယောက်ျားသားမျိုးကိုတော့ ဘယ်မိန်းကလေးမှ တော်ရုံမရွေးချယ်ချင်ကြပါဘူး။
ပြသနာတစ်ခုခုကြုံလာတဲ့အခါ အကောင်းဆုံး ဖြေသိမ့်ပေးနိုင်တဲ့သူ ၊ ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်သူ ၊ နွေးထွေးမှူပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုလည်း မိန်းကလေးတွေ သဘောကျနှစ်သက်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးအများစုဟာ ပြသနာတစ်ခုခုကြုံလာတိုင်း ၊စိတ်ပျက်အားငယ်လာတိုင်း ရင်ဖွင့်လို့ရမယ့်သူတစ်ယောက်၊ ဒါမှမဟုတ် စိတ်သက်သာမှူကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့စကားသံတွေကိုမျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ သနားကြင်နာတတ်ပြီး နွေးထွေးတဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေဟာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသော မိန်းကလေးတွေရဲ့ အိပ်မက်ထဲကမင်းသားလေးတွေပါပဲတဲ့။
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ အဓိကကျပြီး အရေးအကြီးဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် ။ ဒီအချက်တစ်ချက်တည်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာနဲ့တင် တော်တော်လေး ထိရောက်တဲ့ဆွဲဆောင်အားကို အတိအကျပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ မိန်းကလေးတော်တော်များများ ဘယ်လိုမှမငြင်းနိုင်လောက်တဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်ဖို့ ဒီတစ်ချက်နဲ့တင်ကောင်းကောင်းလုံလောက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အပေါ်ကအချက်တွေအားလုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လူချောလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေဖို့ပါပဲတဲ့။
ဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာ အိပ်ရေးဝဖို့ အရမ်းအရေးကြီးတယ်နော်
အိပ်ရာကနိုးလာတိုင်း ပင်ပန်းစွာနိုးထလာပြီး အိပ်ရာလည်းမထချင် ဘာလုပ်လုပ် မလန်းမဆန်းနဲ့ စိတ်မကြည်မလင်ခံစားရတာမျိုးကို မကြာခဏ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဘယ်လောက်ပြန်အိပ်အိပ် အိပ်ရေးလည်းမဝသလို တနေကုန်ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေဖြစ်နေရတာမျိုးတွေရဲ့ အဓိကအကြောင်းပြချက်ကတော့ အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းနေတဲ့ အလေ့အကျင့်လေးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တချို့အမူအကျင့်လေးတွေကို ပြုပြင်လိုက်ရုံနဲ့ တစ်နေ့တာကိုလန်းဆန်းတက်ကြွအားအင်ပြည့်ဝစွာ အလုပ်ပြီးမြောက်စေဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တာမို့ ဘယ်လိုအမူအကျင့်လေးတွေကို ရှောင်ပြီး ဘယ်လို အလေ့အထလေးတွေကိုဆောင်ရမလဲဆိုတာကို စုစည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
အိပ်ရာဝင်ချိန်မမှန်ခြင်းနဲ့ အိပ်ရာဝင်နောက်ကျခြင်းတွေကလည်း တနေကုန်မလန်းဆန်းခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရာဝင်ချိန်နောက်ကျပြီး မနက်စောစောပြန်ထရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ လုံလောက်တဲ့အိပ်ချိန်မရရှိခြင်းကြောင့် အဲဒီလိုခပ်နုံးနုံးခံစားမှူမျိုးကို ပိုခံစားရတတ်ပြီး နောက်မှ အစားထိုးပြန်အိပ်မယ်ဆိုရင်တောင် ပုံမှန်အိပ်ချိန်မှာအိပ်တာလောက် လန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိနေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဖုန်းတစ်ခုတည်းမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကွန်ပြူတာ ၊ Tablet ၊ PSP အစရှိတဲ့ ဘယ်လို Electronics Device တွေကိုပဲသုံးသုံး လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးအချိန်လွန်သုံးစွဲမိတဲ့အခါမျိုးမှာ ခပ်နုံးနုံးခံစားမှူမျိုးကိုခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ မျက်စေ့ကို အလုပ်ပေးတာအရမ်းများသွားတာမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်သလို အိပ်ချိန်ကိုပါသတိမရတော့ပဲ သန်းခေါင်ကျော်အထိ တမေ့တမောသုံးစွဲနေမိတတ်တာတွေကြောင့်လည်း နောက်တစ်နေ့မှာ တနေကုန် မလန်းဆန်းတဲ့ ခံစားမှူမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။
အိပ်ခါနီးမှာ ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုစားသုံးမိခြင်းကလည်း အိပ်မပျော်ခြင်းကိုဖြစ်စေသလို နောက်တစ်ရက်မှာ အိပ်ရေးမဝတဲ့ခံစားမှူမျိုးတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ရေ၊နွားနို့နဲ့ ပျားရည်ပူပူလိုမျိုး အိပ်စက်ခြင်းကိုအားပေးတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုသာရွေးချယ်သင့်ပြီး ချောကလက် ၊ ကိုလာ နဲ့ ကော်ဖီလိုမျိုးတွေကိုတော့ အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ လုံးဝမစားသောက်မိဖို့ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
အချိုဓာတ်၊အဆီဓာတ်များတဲ့အစားအစာတွေ ၊ Heavy Meals တွေနဲ့ ပူပူစပ်စပ်အစားအသောက်တွေကို မအိပ်ခင်မှာလုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။ အိပ်စက်ခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတတ်သလို အခန့်မသင့်ရင် ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အထိ လူကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ပေးပြီဆိုကတည်းက နောက်တစ်ရက်မှာ တစ်နေ့တာကိုလန်းဆန်းစွာကျော်ဖြတ်ဖို့ အရမ်းခဲယဉ်းသွားပါပြီ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာပျင်းတဲ့သူတွေ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ တော်ရုံတန်ရုံ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ Work Out လုပ်ခြင်းဟာ အိပ်စက်ခြင်းကိုအားပေးသလို သွေးလည်ပတ်မှူကိုလည်းကောင်းစေတာမို့ နောက်တစ်ရက်မှာ စိတ်ရောလူပါလန်းဆန်းစွာနိုးထနိုင်ဖို့ အရမ်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
Covid -19 ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှူတွေကြောင့် ရှိရင်းစွဲအလုပ်အပြင် တခြားကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုပါ ခြေလှမ်းစတင်ဖို့ကြိုးစားလာကြတဲ့အထဲမှာ တချို့ကလည်း တော်တော်အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ခရီးပေါက်နေပြီဖြစ်သလို တချို့ကတော့ ဘယ်ကနေစတင်ပြီးလုပ်ကိုင်ရမယ်၊ ဘယ်လို လုပ်ငန်းမျိုးကို ရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားရခက်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်လို လုပ်ငန်းမျိုးလေးတွေကတော့ အရမ်းလည်း Heavy မဖြစ်ပဲ စတင်နိုင်မလဲ ၊ ဘယ်လို လုပ်ငန်းမျိုးတွေကတော့ ဝယ်လိုအားများပြီး အောင်မြင်မှူရနိုင်ချေရှိမလဲဆိုတာကို ချင့်ချိန် ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက် အောင်မြင်နေကြတဲ့ Online Business လေးတွေထဲကတချို့ကို ရွေးချယ်စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အစားအသောက်ဆိုတာ လူတော်တော်များများမငြင်းပယ်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အစားအသောက်လေးတွေပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းဟာလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ငွေရှာရလွယ်တဲ့ အသေးစားစီးပွားရေးလေးတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပဲ။ Main Dish လေးတွေကစလို့ မုန့်ပဲသွားရည်စာလေးတွေအထိ Packaging လှလှလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကူးအလိုက်ဆွဲဆောင်မှူရှိရှိ ဖန်တီးရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုံမှန်ရောင်းကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စားလို့ကောင်းဖို့နဲ့ စေတနာပါဖို့တော့ လိုတာပေါ့နော်။
ကိုယ်ဝါသနာပါရာအလိုက် သိထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရေးသား မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် Blog ရေးသားခြင်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ Travel , Lifestyle , Beauty အစရှိသဖြင့် ကိုယ် ကျွမ်းကျင်ရာအလိုက် ကိုယ်သိထားတဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေကို ပုံမှန်မျှဝေပေးရင်း လူသိများလာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး Professional ဘက်အထိသွားနိုင်တဲ့ ဒီအလုပ်လေးကလည်း အသေးစားကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းစီးပွားရေးလေးတစ်ခုပါပဲ။
ကိုယ်က ပညာတစ်ခုခုကို အမှန်တကယ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေတဆင့် သင်တန်းလေးတွေပို့ချပေးတာမျိုးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာစကား ၊ အိမ်တွင်းမှူ၊ စက်ချုပ် အစရှိသဖြင့် ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာအလိုက် အွန်လိုင်းကနေတဆင့် သင်ပေးလို့ရပါတယ်။ ခုလို Covid Crisis ကြောင့် အပြင်မထွက်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဒီလိုအွန်လိုင်းသင်တန်းလေးတွေ အများကြီးခေတ်စားလာတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။
အိမ်မှာနေရင်း စီးပွားရှာနိုင်တဲ့ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ကိုယ်ပိုင် Idea လေးတွေနဲ့ လက်မှူပစ္စည်းလေးတွေပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းပါပဲ။ သိုးမွှေးအိတ်ကလေးတွေကစလို့၊ Handmade Jewelry လေးတွေအထိ အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ့် ပစ္စည်းလေးတွေကို စိတ်ကူးရှိသလို အမျိုးမျိုးဖန်တီးပြုလုပ်ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ အလှအပမြတ်နိုးသူတွေဟာ Chemical ပါဝင်တဲ့ Cosmetics တွေထက် သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကို ပိုပြီးရွေးချယ်လာကြတာတွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ အော်ဂဲနစ် Ingredients တွေကိုအသုံးပြုပြီး အလှအပနဲ့ အရေပြားထိန်းသိမ်းရေး ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့ဈေးကွက်ဟာလည်းတွင်ကျယ်လာသလို ဝယ်လိုအားလည်း အတော်အသင့်များပြားလာတာမို့ ဒီလို Organic Skincare Product တွေကို ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်လှလှလေးတွေနဲ့ ဖြန်ဖြူးရောင်းချခြင်းဟာ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။